I-Ethiopia Visa | Isicelo se-EVisa yase-Ethiopia | natvisa.com
Isicelo se-Visa se-Intanethi kwi-Intanethi
Isicelo se-eVisa se-Ethiopia senza umntu akwazi ukungena ngokusemthethweni e-Ethiopia ngaphandle kokusebenzisa i-visa yendabuko. I-visa yase-Ethiopia kwi-Intanethi iyafumaneka kwiwebhusayithi yesebe laseburhulumenteni lase-Ethiopia. Apha, abantu bayacelwa ukuba bagcwalise isicelo se-Visa ngeenkcukacha kunye neenkcukacha zokuhamba kunye nefoto yobungakanani bencwadana yokundwendwela kunye nekopi yeskena sokundwendwela. Ngokuvunywa, umntu lowo uzisa i-visa kwifom ye-pdf kwi-imeyile. Ubunyani bevisa ukuba iya e-Ethiopia kuqala ngomhla wokungena kweli lizwe. Abantu belizwe lase-Afrika abangakwazi ukwenza i-e-Visa yentlawulo kwi-Intanethi banokufaka isicelo kwi-Intanethi benze intlawulo yokufika kwabo kwisikhululo senqwelomoya saseAddis Ababa Bole ngemali.
Iindidi ze-Ethiopia Visa
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli - Ukuya kwi-30 okanye kwi-90 yeentsuku enye Faka isicelo ngoku
Ishishini le-eVisa Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 enye Faka isicelo ngoku
Zimasa iintlanganiso zeshishini
Yiya kwimicimbi yeshishini
IVisa eya e-Ethiopia iya kunikezelwa kubafakizicelo abanepasipoti eqhelekileyo esemthethweni encinci ukusebenza kweenyanga ezi-6. Kuxhomekeka kwiimeko ezichaziweyo, ukungena nokuhlala komntu lowo kuya kusebenza de kube kuphelelwe lixesha lokuvunyelwa. Iphepha-mvume lokundwendwela lingena ngokuhlala ukuya kwiintsuku ezingama-30 okanye iintsuku ezingama-90.
Xa usenza isicelo seVisa yaseTopiya, abafaki zicelo kufuneka baphendule uthotho lwemibuzo. Yonke imibuzo kufuneka iphendulwe ngokuchanekileyo. Ukusilela ukwenza njalo kungakhokelela ekungavunyelweni kwivisa. Ukongeza koku, abahambi kufuneka banikezele ngamaxwebhu abalulekileyo abandakanya awabo ipaspoti, yaye ifoto yabo.
Iphuli yokuNgena evunyelwe
Ukuze ungene ngempumelelo e-Ethiopia nge-eVisa, undwendwe luya kudinga ukungena kweli lizwe ngenqwelomoya ngenqwelo moya I-Airport ye-Addis Ababa Bole. Le yeyona ndawo kuphela yokungena eyamkela i-eVisa yase-Ethiopia.
Intlawulo ekwi-Intanethi okanye ekufikeni
Zininzi iindlela zokuhlawula nge-visa ezikhoyo kubafaki zicelo abanjengo I-MasterCard, iMaestro, umrholo womdibaniso, iklabhu yedinala, iAmex, iJCB, iAlipay kunye neFuman. Ukubangaba abemi base-Afrika basilele ukwenza intlawulo kwi-Intanethi, banokufaka isicelo nje se-Visa kwi-Intanethi kwaye bahlawule intlawulo ye-visa yesixa-mali ekufikeni kwabo I-Airport ye-Addis Ababa Bole.
Iinkcukacha ze-Ethiopia Visa
Yintoni i-Visa yaseTopiya?
I-Visa yase-Ethiopia ngumgaqo obalulekileyo wokuhamba ekufuneka ukuba umhambi ngamnye atyelele eli lizwe. Ngo-2017, iMicimbi yokuFudukela kweli lizwe kunye neLizwe lonke e-Ethiopia yavula inkqubo ye-visa yase-Ethiopia ukuze ikhawuleze inkqubo yokufumana i-visa. I-eVisa yaseTopiya yincwadi egunyazisiweyo yokuhamba ngomatshini evumela ukuba abahambi bangene kweli lizwe. Inkqubo ye-eVisa iyafumaneka kubemi kwihlabathi liphela. Isusa isidingo sokuba abantu batyelele I-Ambassia okanye bamele emgceni we-visa. Iifom zesicelo kulula ukufumana kuzo kwi-intanethi kwaye kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukuyigqiba yonke inkqubo.
Amanyathelo okufaka isicelo seVisa yaseTopiya
Inkqubo yokufumana i-visa ibe lula kakhulu ngenxa yokungeniswa kwenkqubo ye-visa. Yonke le nkqubo iyakhawuleza kwaye ilula, ke ngoko, yenza ukuba abahambi abavela kumazwe ahlukeneyo bafumane i-visa ngesixa esincinci sexesha.
Gcwalisa ifom yesicelo seVisa: Ukuzalisa ifom yesicelo se-visa linyathelo lokuqala lokufumana i-visa kwi-intanethi. Ungayifumana le fomu kwiwebhusayithi karhulumente. Khuphela nje usetyenziso, uligcwalise ngeenkcukacha ezichanekileyo kwaye ulingenise.
Ungeniso lwamaxwebhu: Inyathelo elilandelayo emva kokugcwalisa ifom yesicelo kukubonelela ngamaxwebhu afunekayo. Unokulayisha ngokulula ikopi yamaxwebhu kunye nefom yesicelo sakho sevisa. Ikopi eskeniweyo kufuneka icacise abasemagunyeni ukuze babone ulwazi abaludingayo ngokulula.
Yenza intlawulo: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo se-visa iquka ukwenza intlawulo. Zininzi iindlela zokuhlawula i-visa ezifumanekayo kubafakizicelo, ezinje nge-MasterCard, Maestro, i-Union pay, i-Diners Club, i-Amex, i-JCB, i-Alipay kunye ne-Discover. Ukuba abemi bamazwe ase-Afrika bayasilela ukwenza intlawulo kwi-Intanethi, banokufaka isicelo se-visa ekwi-intanethi kwaye bahlawule imali ye-visa ngemali, ekufikeni kwabo kwisikhululo senqwelomoya i-Addis Ababa Bole.
Ixesha lokuqhubekeka kwefom yesicelo ihlala isusela kwiiyure ezingama-24 ukuya kuthi ga kwiintsuku ezi-3. Nje ukuba i-visa isetyenzwe, abafaki-zicelo baya kwaziswa kwaye i-visa iya kuthunyelwa kwi-Intanethi.
Ngubani ofuna iVisa yaseTopiya?
Njengoko sele kuchaziwe ngaphambili, i-Visa yakho yeyona ncwadi ibalulekileyo yokuhambela kwelinye ilizwe. Ke ngoko, uninzi lwabemi kwilizwe lonke lufuna ivisa xa betyelele ilizwe. Ukhutshelo lwenziwe kubemi bamazwe athile anjengeKenya neJibouti. Abemi baseKenya abayidingi i-visa yokungena kumhlaba wase-Ethiopia ixesha elingangonyaka. Abemi base Djibouti banokuhlala e-Ethiopia ngaphandle kwe visa kwithuba leenyanga ezintathu. I-eVisa eya e-Ethiopia iyafumaneka kubemi balo naliphi na ilizwe elinencwadana yokundwendwela efanelekileyo.
Amaxwebhu ayimfuneko kwi-eVisa
Ifomu yokufaka isicelo: Xa usenza isicelo seVisa yaseTopiya, abafaki zicelo kufuneka baphendule uthotho lwemibuzo kwifom yabo. Yonke imibuzo kufuneka iphendulwe ngokuchanekileyo. Ukusilela ukwenza njalo kungakhokelela ekungavunyelweni kwivisa.
Ipasipoti esebenzayo: I-Visa iyakunikezelwa kubafaki-zicelo abanencwadi yokundwendwela eqhelekileyo esemthethweni ubuncinci bezinyanga ezi-6. Ngokuxhomekeka kwiimeko ezichaziweyo, ukungena nokuhlala komntu lowo kuya kusebenza de kube lelo xesha. Iphepha-mvume lokundwendwela lingena ngokuhlala ukuya kwiintsuku ezingama-30 okanye iintsuku ezingama-90
Isetifiketi sokuzala: Abahambi kufuneka banikeze izatifikethi zabo zokuzalwa kumagosa. Olu xwebhu luya kubavumela ukuba bajonge upelo lwegama lakho, umhla wokuzalwa, indawo owazalelwa kuyo nolunye ulwazi ngesicelo se-visa.
Izicwangciso zokuhamba: Abahambi kuya kufuneka banikeze iinkcukacha zezicwangciso zabo zokuhamba kubasemagunyeni abafudukayo. Oku kubandakanya ukufika kwabo okuqinisekisiweyo kunye nokubuya kwamatikiti. Olu xwebhu luza kubavumela ukuba babone ukuba ngubani na umntu ongena kwilizwe elo kunye nomhla abaceba ukumka kuwo.
Isiteyithimenti sezemali: Ukuba ukwilizwe langaphandle, kubaluleke kakhulu ukuba ube nemali eyaneleyo. Kukho iindleko ezininzi ezifuna ukhathalelo xa undwendwela ilizwe langaphandle, njengokutya, ukuhamba, indawo yokuhlala kunye nenani lezinye izinto. Kukho namathuba kaxakeka kwezonyango. Nokuba imeko iyintoni na, kufuneka ube unayo imali eyoneleyo yokuzixhasa. Ukuqinisekisa ukuba kuyenzeka oko, ugunyaziwe wokungena kwelinye ilizwe ucela ukuba ubanike ingxelo-mali yakho yokugqibela yeenyanga ezintathu.
Ubungqina bendawo yokuhlala: Abantu abafaka isicelo se-Visa yase-Etiyopiya yase-Ethiopia kufuneka banike ubungqina bendawo yokuhlala e-Ethiopia. Abafaki-zicelo kufuneka babonise amaxwebhu afanelekileyo endawo yokuhlala abebehlala kuyo, nje ukuba babe kweli lizwe. Ezi ndawo zihlala kuzo zinokuba zihotele ezibhalisiweyo, iimoto, indlu yeendwendwe, iikati okanye nayiphi na enye indawo ethe bagqiba kwelokuba bahlale kuyo.
Isatifikethi sikagqirha: Abandwendweli makhaya kufuneka banikeze isatifikethi sabo sonyango esibonisa ukuba bakulungele ukuya kwilizwe langaphandle. Kananjalo, kufuneka banikeze isatifikethi esibonisa ukuba abathwali naluphi na usulelo okanye abanaso isifo esibulalayo. Isizathu esisemva kwesi siqinisekiso kukuba qinisekisa ukuba abahambi abazifumani kwimeko ezinzima ukuba bayagula ngexesha lokundwendwela kwabo kungekho mntu ubakhathaleleyo. Kwanabo bahamba nenkampani kufuneka baveze isatifikethi sabo sonyango.
Ingxelo yamapolisa: Abantu abafakwe kuluhlu lukazwelonke lwabantu abangafunekiyo abayi kuvunyelwa ukuba bangene kwilizwe lesizwe lase-Ethiopia. Umntu akufuneki enze nayiphi na ingozi kwimali yokhuseleko lukazwelonke okanye kumyalelo kawonke-wonke phantsi komthetho.
Ngaba i-visa-on-ukufika kunye nee-embassia zase-Ethiopia ziyaqhubeka zikhupha ii-visa emva kokuba i-Ethiopia iphumeze i-visa e-intanethi?
Ewe. Inkqubo yokukhutshwa kwe-visa ayitshintshi; isicelo se-visa esikwi-intanethi sithe saziswa nje ukwenza izinto zilula. Uya kuba nakho ukufumana visa xa ufika kwisikhululo senqwelomoya saseAddis Ababa Bole ukuba uyakufanelekela oko. Ungandwendwela ne-ambassia yase-Ethiopia ekufutshane kuwe ukuze ufumane i-visa yakho.
Leliphi ixesha lokulungisa i-eVisa yaseTopiya?
Ixesha lokulungisa eliqhelekileyo le-eVisa yase-Ethiopia lintathu (iintsuku ezintathu), kwaye ngamanye amaxesha liqhubekeka lingaphantsi kwalonto. Ke ngoko, xa usenza isicelo se-eVisa yaseTopiya, qiniseka ukuba umhla wakho wokuhamba awusondele. Faka isicelo ubuncinci kwiintsuku ezintathu ngaphambi komhla ocetywayo. Ukuze ube kwelinye icala elikhuselekileyo, lenze iintsuku ezisixhenxe kuba asizukubekwa tyala kulo naluphi na ulibaziseko onalo ngenxa yokungafaki ngexesha.
Ngaba kunokwenzeka ukuthumela ipasipoti yam, ifoto, kunye / okanye imvume yokuhlala endaweni yesikena?
Ewe Unga. Ayinamsebenzi nokuba ngaba iifayile zemifanekiso okanye iifayile eziskenwe. Into ebaluleke kakhulu kukuqinisekisa ukuba amaxwebhu acacile kwaye ayabonakala kuye nabani na obajongayo. Kuya kufuneka uphinde uzifake kwifomathi efunekayo ukuze kungabikho micimbi ngokusebenza kwe-visa yakho.
Ndigqibile ukufaka isicelo kunye nentlawulo yam kodwa akukho bungqina be-imeyile, ndenza ntoni?
Emva kokungenisa isicelo sakho se-eVisa, kuya kufuneka ufumane i-imeyile engqina ukuba isicelo sakho singeniswe ngempumelelo. Ukuba awuyifumana le imeyile, unokujonga ibhokisi yakho yogaxekile ye-imeyile. Ukuba awuyifumani apho, nxibelelana nathi ukuze sikwazi ukuphanda ukuba ingxaki inokuba yintoni.
Zeziphi izibonelelo zokufaka isicelo se-Visa kwi-intanethi ngaphezulu kwe-visa ekufikeni?
Isicelo se-visa esikwi-intanethi sikusindisa ixesha elininzi kunye namandla kuba isicelo sinokwenziwa kwi-intanethi. Ukukhutshwa kwe-visa kukwenziwa nakwi-intanethi ngaphandle kokuba uye kwindlu yozaku-Ethiopia uyokuthatha i-visa yakho. Ikwanika ukhuseleko ngakumbi kuba ungafumana i-visa yakho ngaphambi kokuba uhambe ngokungafaniyo nokufumana i-visa ekufikeni.
Ndingasazi isizathu sokuba isicelo saliwe?
Kukho izizathu ezahlukileyo zokuba kutheni i-eVisa yakho yaseTopiya isenokwaliwa kodwa isaziso sokwaliwa singaze siqulathe isizathu. Isenokuba sisiphumo sempazamo kwisicelo sakho okanye ezinye izizathu. Ukuba isicelo sakho se-eVisa siyaliwe, kuya kufuneka uzame ukufaka isicelo kwakhona ukuya kwindlu yozakuzo yase-Ethiopia.
Ngaba ndifumana imbuyekezo ukuba isicelo sam saliwe?
Intlawulo oyenzileyo endaweni yesicelo sakho ayisosiqinisekiso sokuba i-visa iyakuvunywa. Yimali engqongqo yokuhlawula, kwaye ayibuyiselwa. Olu lwazi lukwiimeko zethu zeenkonzo; ke, zama kwaye uzifunde ukuze ungabi nolindelo olungenangqondo.
Ndingenise enye okanye ezingaphezulu kolwazi lwam oluchanekileyo. Unganceda uguqule?
Ngexesha lokufaka isicelo sakho, ngaphambi kokungenisa naluphi na ulwazi olubalulekileyo, ufumana ukukhawuleza okukucela ukuba uqinisekise kwaye ujonge kwakhona ulwazi oluza kulungenisa. Kungenxa yokuba ulwazi, lwakuba lufakiwe, alunakuguqulwa. Ukuba ufaka naluphi na ulwazi ngokungalunganga, kuya kufuneka uphinde ufake isicelo.
Ndiyifumana njani le leta yokuvunywa kwe-eVisa yam?
Emva kokufaka isicelo se-eVisa kwaye iyavunywa, uyakufumana uxwebhu lwe-eVisa lokuvunywa kwi-imeyile yakho. Kuya kufuneka uprinte olu xwebhu njengoko luyinto oya kuyithatha kunye nawe xa usiya e-Ethiopia. Ukuba awukasifumani isigqibo se-visa, unokujonga imeko yeVisa yakho kwiwebhusayithi.
Iqala nini ukungqinisisa i-visa yam? Ngaba kususela kumhla wokungena e-Ethiopia okanye kumhla wokukhutshwa?
Ukuqinisekiswa kwe-eVisa yase-Ethiopia kuqala ukusuka kumhla owukhethileyo njengomhla wokungena kwakho xa wawusenza isicelo sevisa. Ubunyani abuqali ukusuka kumhla wokukhutshwa, kwaye ayiqali ukusuka kumhla wokufika kwakho e-Ethiopia. Ungahamba futhi uye e-Ethiopia naphi na xa ufuna ngaphakathi kwexesha lokuqinisekisa.